ငွေနဲ့ပေါက်လို့ ဘာသာမပျောက်စေနဲ့ အပိုင်း ( ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငွေနဲ့ပေါက်လို့ ဘာသာမပျောက်စေနဲ့ အပိုင်း ( ၂ )
ငွေနဲ့ပေါက်လို့ ဘာသာမပျောက်စေနဲ့ အပိုင်း ( ၂ )
Posted by thihayarzar on Jun 1, 2012 in Creative Writing | 35 comments
ပြိုလဲနေတဲ့ အိမ်ကိုလည်း ပြန်ဆောက်ပေးမယ် ကျောင်းထုက်ထားတဲ့ကလေးတွေကိုလည်း ကျောင်းပြန်တက်နိုင်အောင်ဆက်ထားပေးမယ် ခင်ဗျားဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး သက်သာပျောက်ကင်းတဲ့အထိအထူးကုဆရာသန်တွေနဲ့ကုသပေးပါ့မယ် … အခုလိုပြောရတာကလဲ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဒုက္ခတွေကို ကယ်တင်ချင်လို့ပါ .. ဒီလိုကယ်တင်တဲ့နေရာမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ဘုရားကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှ ဖြစ်နိုင်မှာမို့ပါ … အဲဒါ ခင်ဗျားတို့မိသားစုအနေနဲ့ စဉ်းစားပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာရင် အကြောင်းကြားပေးပါ … ကိုကြည်လွင်တို့မိသားစု မမျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာ မမျှော်လင့်တဲ့စကားကို ကြားလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားပါတယ် .. မိမိတို့ ငယ်ငယ်လေးထဲက အရိုးစွဲအောင် ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားကို စွန့်လွှက်ပြီး စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးကြောင့် အခြားဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာ အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး .. အခုတော့ဘယ်လိုမှ ထင်မထားတဲ့အရာတွေက စိတ်ကို မွန်းကြပ်စေခဲ့ပါတယ် … ကိုကြည်လွင်အနေနဲ့ စဉ်းစားစရာအချက် နှစ်ချက်ပေါ်လာပါတယ် အဲဒါကတော့ ယခုဘ၀ကောင်းစားရေးနဲ့နောင်သံသရာကျင်လည်ရေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် .. နောက်ပြီး ဒီကိစ္စဟာမိသားစုအရေးဖြစ်တဲ့အတါက် မိမိတစ်ဦးတည်းနဲ့တင်လည်းဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး .. အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ မိမိက ဆုံးဖြတ်ချက်လွဲမှားသွားရင် ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေပါ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ..
အရင်ကနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးပေါ်မှာအပူအပင်မရှိနေလာခဲ့တဲ့ သားသမီးတွေက အခုတော့ တစ်ဘက်ရပ်တဲကုက်လေးထဲမှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့နေနေရပါတယ် …မိသားစုစီးပွားရေးချွက်ခြုံကျမှုကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ ကျောင်းပညာရေးကလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ကျောင်းထုက်ထားရပါတယ် .. သားသမီးတွေရဲ့ဘ၀ရှေ့ရေး မိသားစုစားဝတ်နေရေး မိမိရဲ့ကျန်းမာရေး နောက်ပြီး တဲကုတ်လေးထဲမှာ နေရတဲ့ဘ၀နောင်ရေး စတာတွေက ကိုကြည်လွင်တို့မိသားစုကို အခြားဘာသာထဲကို ရောက်ဖို့အတွက် တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် .. ဒီအချိန်မှာ အခြားဘာသာဝင်တွေဟာ ကိုကြည်လွင်တို့ မိသားစုနေတဲ့တဲအိမ်လေးကို နေ့ညမပြတ် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ၀င်ထွက်နေကြပြီး သူတို့ဘုရားကလူသားတွေအပေါ်ဘယ်လိုမေတ္တာထားတယ် ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာတွေ တရားတော်ရဲ့ အနှစ်သာရတွေဟာ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးများတယ် သူတို့ဘုရားသာလျှင်လူသားတွေရဲ့ကယ်တင်ရှင် အစစ်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ လာရောက်စည်းရုံးဟောပြောကြပါတယ် …
သူတို့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းမှလည်း ကိုကြည်လွင်တို့မိသားစု လတ်တလော စားသောက်ဖို့၊ ဆန် ဆီ ငရုပ်သီး ကြက်သွန် အ၀တ်အထည်များကိုလည်း ပို့ပေးကြပါတယ် .. နောက်ပြီးပြိုလဲနေတဲ့အိမ်ကိုလည်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် သွပ်များ သံများ အသားများကိုလည်း မက်လောက်အောင် ပို့ပေးကြပါတယ် … ကိုကြည်လွင်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းအောင်ဆိုပြီး သူတို့ဘုရားကျောင်းကိုခေါ်ကာ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပြီး အထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့ကုသပေးကြပါတယ် .. အထူးကုဆရာဝန်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အိပ်ယာထဲမှာလဲ ဘုန်းဘုန်းလဲနေတဲ့ ကိုကြည်လွင်ရဲ့ရောဂါဝေဒနာဟာ တဖြည်းဖြည်းသက်သာလာပါတယ် .. အိမ်ကိုလည်းလက်သမားများနဲ့ဆောက်လိုက်တဲ့အခါ နှစ်ပတ်အတွင်းပြီးသွားပါတယ် … ကိုကြည်လွင်တို့မိသားစုကို အခုလို စေတနာဗလပွနဲ့ဘာလို့ထောက်ပံ့နေကြတာလဲဆိုရင် အဖြေကတော့ရှင်းနေတာပါပဲ … ခွေးအများဟာသူတို့အစာဖြစ်လာမယ့်သားကောင်ကို စုပေါင်းအင်အားနဲ့ဝိုင်းအုံပြီး ကိုက်ဖြတ်စားသောက်သလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ် … သူတို့စက်ကွင်းထဲကိုရောက်လာတဲ့သားကောင်ကိုလည်း အလွက်ပေးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး .. အခုလည်း ကိုကြည်လွင်တို့မိသားစု ခွေးအတွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် .. အိမ်ဆောက်ပြီးလို့နောက်တစ်ရက် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လာကြပါတယ် .. နောက်နေ့မှာတော့ ကိုကြည်လွင်တို့အိမ်ဦးခန်းမှာ အမြတ်တနိုး ညတိုင်းရှိခိုးဦးချ နေတဲ့ဘုရားပုံတော်ဟာ အိမ်ရှေ့ရေမြောင်းထဲကိုရောက်နေပါတယ် … အိမ်နီးနားချင်း ဗုဒ္မဘာသာဝင်မှာတော့ ရေမြောင်းထဲရောက်နေတဲ့ ဘုရားပုံတော်ကြောင့်တေ်ာတော်လေး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြ၇ပါတယ် .. ရေမြောင်းထဲက ဘုရားပုံတော်ကို ပင့်ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ထဲရှိရေကန်ကြီးနားက သစ်ပင်မှာ သွားရောက်ချိတ်ထားပါတယ် …
သဂျီးကတော့ ဘယ်လို ၀င်ပြောမယ်မသိ …
ဒီမှာတော့ ဂလို ရေးထားသဗျ..
The largest marketing companies that currently exist are the Catholic Church and Microsoft Corporation.
သများကို မီးဒုတ်မရှို့ဂျနဲ့ ဦး
ဟိုတလောကမှ ရုပ်ရှင်တကား ကြည့်ထားတယ် Tom Hank ရိုက်ထားတာ The Angel and Devil ဆိုလား မမှတ်မိတော့ဘူး …
အင်း ကျွန်တော်တို့ ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ညီညွတ်အားတွေ အရမ်းကို လိုအပ်နေပါပြီ။
MG ရွာသူား တွေ ရဲ့ ညီညွတ်အားနဲ့ ဝိုင်းကူကြည့် ရအောင်ဗျာ
စာတွေ့ က နေလက်တွေ့ ကိုသွားကြည့်ရအောင်
ခုရက်ပိုင်း.. ဆြာ့ဆီက.. တက်လာသမျှ.. ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေပါလားနော…
သာမန်အားဖြင့်.. (အလိုက်သိစွာနဲ့).. လက်ခံထားတယ်ဆိုပေမဲ့.. တောက်လျှောက်တင်လာရင်တော့.. ဒီက.. ရွာသူားတွေဆီ..အပူတွေကူးမှာစိုးပါတယ်..
လောကကြီးမှာ… လူ့သက်တန်း လွန်လှနှစ်၁၀၀ထဲ…
အကို ပြောတာ မှန်ပါတယ် ရှုထောင့်တစ်ခု ကနေကြည့်ရင် .. ဒါပေမယ့် .. နောက် ..ရှုထောင့်တစ်ခုမှာလည်း …
လောကမှာ အရေးအကြီးဆုံးအရာ တစ်ခုရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ် .. Survival ပါ . Survival နဲ့ ဘာသာတရား နဲ့ ဘယ်ဟာရွေးမလဲ ဆိုရင် .. ? ကိုယ်တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ ဘယ်ဟာရွေးမလဲဆိုရင် .. ? လူသားစစ်ရင် Survival ကို ဘဲရွေးမှာပါ .. Survival က real thing .. ဘာသာတရားက Virtual သူက အသုံးချခံ ပစ္စည်းသက်သက် လို့ ထင်မိပါတယ် .. ဘာသာတရားကြောင့် စစ်ပွဲဖြစ်တာ non sense ပါ .. မိုက်ရူးရဲဆန်တာပါ ..
ပြီးတော့ .. သူကဖြင့် ဗုဒ္ဒဘာသာ ကိုးကွယ်တာ .. သူကဖြင့် ခရစ်ယာန် .. သူကတော့ မူစလင် .. ဒီလိုဘဲခွဲနေကြတယ်နော် .. တကယ်တမ်းက .. လူတိုင်းကိုယ်စီ ဘာသာ တစ်ခုစီနဲ့ ပါ .. ဗုဒ္ဒဘာသာ ကိုးကွယ်သူ အချင်းချင်း မယုံရင် သေသေချာချာမေးကြည့် .. အပေါ်ယံအားဖြင့်တူ မယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် .. နက်နဲတဲ့အပိုင်းရောက်လာတာနဲ့ အမျှ အတွေးအခေါ် တွေဟာ ခြားနား လာပါလိမ့်မယ် . . ဒါဟာ ဘာကိုပြသလဲဆိုရင် လူတစ်ယောက် ဘာသာ တစ်မျိုးစီရှိတယ် ဆိုတာကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်လည်း တရားထိုင်တဲ့မူတွေ ကအစ ကွဲနေတာပေါ့ .. ( မိရိုးဖလာ ဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာ .. ) ယခုကိစ္စကိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် .. ခရာစ်ယာန် ဘာသာက မဲဆွယ်တာ လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတောင် ဒီမိုကရေစီ ရနေပြီ .. ဘာသာတရားလည်း ဒီမိုကရေစီပေးသင့်နေပါပြီ .. လူတွေအားကိုးထိုက်တဲ့ ဘာသာက နောက်ဆုံး အနိုင်ရမှာ သေချာပါတယ် ဗုဒ္ဒဘာသာကြီး မပျောက်ပျက်စေချင်ရင် Marketing ကောင်းကောင်း တော့ ရှိဖို့လိုနေပါပြီ ..
ဖျက်လို့ဖျက်ဆီး လုပ်ပြီး ရေးသားခြင်းမျိုး မဟုတ်ရပါခင်ဗျာ … မျိုးချစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေ ရှင်သန်လာအောင်လို့ပါ .. ဒီလိုလူမျိုးတွေ အရင်ကရှိခဲ့တယ် နောင်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသွားရောက်ကူညီသင့်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုသိစေချင်တာပါ .. လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေပါ ရွာထဲမှာလူမျိုးပေါင်းစုံ ရှိကြတယ်ဆိုတာသိပါတယ် .. ဘာသာရေးစိတ်ဓာက်ရေးတွေ တိုးပွားစေလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် … ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ သာသနာပြုကြပါ .. လူကိုလူခြင်းမျိုတာတွေ မလုပ်စေချင်ပါဘူး .. သူတို့ကဆက်လုပ်နေရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ငြိမ်ငြိမ်နေနေမှာမဟုတ်ပါဘူး..
ကိုသူရ ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်။ အပေါ်က အကို ပြောတဲ့ စကားတချို့ကိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံ နဲ့ ပဲ ယှဉ်ယှဉ် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အဝ ရှိပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာနဲ့ပဲ ကိုယ့် အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကိုမကာကွယ်ရတော့ဘူးလား။
ဘာသာရေးမှာလဲ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် ရှိသလို လွပ်လပ်စွာ စည်းရုံးခွင့် ဆွေးနွေးခွင့်ရှိပါတယ်။
ဘာသာရေးဟာ အယူဝါဒပါ။ အယူဝါဒကို နှစ်သက် လက်ခံလို့ ကိုးကွယ်တာပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ငွေ စည်းစိမ် ဥစ္စာပစ္စည်း နဲ့စည်းရုံးတာ ခြိ်မ်းခြောက် အကျပ်ကိုင် ထွက်ပေါက်မရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှ
ဘာသာကို ကိုးကွယ်ခိုင်းတာ တွေဟာ တရားနည်းလမ်း ကျပါသလား။ ဒီမိုကရေစီ နည်း ကျပါသလား။
ဒီ ပို့စ် ကလည်း ဘာသာလူမျိုး ကိုစော်ကားထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်လူမျိုး အပေါ်မှာ
ဒီလို စည်းရုံးနေတာကို တင်ပြတာပါ။ သူကြီး စည်းကမ်းကို လုံးဝ ဖီဆန်ထားတယ်လို့ မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ marketing ဆင်းရမယ်ဘာသာမဟုတ်ဘူး။။
discount ချစရာမလို သလို promotion လဲ မရှိဘူး၊။
ဟယ်……..အံသြစရာ……”……ကျွန်တော်တို့ …….” ဗုဒ္ဓဘာသာ …တဲ့
ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ ….အဘတို့ ရယ် …..နိပေါလ် တွေက Copy right နဲ့ 
တရားစွဲ နေပါဦးမယ် ….
ကျွန်တော် ရေးတာ တစ်ခုကျန်သွားတယ် .. ဒီ post ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ အတွက် Marketing .. တစ်ခု ဆိုတာ .လေ .. .. ဟီး ..
rခင်ဗျားကရော ဘာလဲ။ ဘာ ဘာသာဝင်လဲ။ကျွန်တော်က ဆွေးနွေးနေတာပါ။
ကဲ ဒါဆို ခင်ဗျား မိသာစု ထဲမှာဆိုရင်ရော marketing ပဲလား
ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူပေမယ့် စစ်လားတုလားတော့မပြောတတ်
မနူးတဲ့သူကို မနပ်တဲ့သူက ဘာသာရေးစည်းရုံးတယ်လို့ခေါ်လို့ရသဗျ
( ယနေ့ဘယ်သာကိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုတွက် ဘာသာထဲဝင်ရင် အဲ့ကောင်အတုဘဲ )
ဒါ့ကြောင့် ပိုက်ဆံပေးပြီးစည်းရုံးတဲ့ကောင်လည်း အတုဘဲ
( ယနေ့ဘာသာရေးထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဘယ်တစ်ယောက်ကမှ ပိုက်ဆံပေးပြီးလိုက်မစည်းရုံးဘူး )
ဝါဒတစ်ခုကို ကြေငြာပြရတဲ့ ချဲလင်းတောင်းရတဲ့ခေတ်
ဒီဇတ်လမ်းမှာဆိုရင် ပိုက်ဆံပေးပြီးစည်းရုံးတဲ့ကောင်လည်း အင်ဘဲ
ပိုက်ဆံရလို့ ဘာသာထဲဝင်တဲ့ကောင်လည်း အင်ဘဲ
ဆင်တစ်ကောင်လောက်ရိုက်ချက် နေလှန်းဆားနယ်လုပ်ပြီး အကြိုက်စားပေါ့
အိမ်လေးခြံလေးရမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းညုပြလိုက်ပြီး ဇိမ်နဲ့တက်နေလိုက်ပေါ့
ကိုယ့်နဲ့ဘာဆိုင်လဲ သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ
that’s right ! ကျွန်တော် လည်း ဘုရားတွေ့ရင် ရှိခိုးတယ် . ဘုန်းဘုန်းတွေ့ရင် လက်အုပ်ချီတယ် . ဘာဖြစ်လို့လည်း လို့ မေးရင် အရင်က အမေသင်ပေးထားလို့ လို့ ဖြေရမှာဘဲဗျို့ ..
ခုတော့ အခြေအနေတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီပေါ့လေ .. ကလေးမှ မဟုတ်တော့တာ . ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးရင် ကို လက်အုပ်ချီပြီး ပြောတယ် .. ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ လေးစားလို့ .. ကြောက်လို့ မဟုတ်ဘူး ..
ကျွန်တော် ဘုရားရှိခိုးတာ အရမ်းလည်း မြန်တယ် .. ဘာဆုမှလည်း မတောင်းဘူး .. မရမှာမှန်း သိနေတာဘဲ လေ .. ဘာလို့တောင်းနေရအုံးမှာလည်း ..
ပြီးတော့ သေပြီးနောင်ဘ၀ .. ဘာဖြစ်မလဲလို့ မေးရင် .. အဲ့သေပြီးနောင် ဘ၀ ဖြစ် တဲ့ အဖြစ်အပျက်က .. ကျွန်တော် နဲ့ .. မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ် .. မှတ်မှ မမှတ်မိတာ သူ့ဖာသာ သူအူဝဲကနေပြန်စတာ တခြားစီဘဲ .. ဟုတ်ဘူးလား .. ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ကတာ့ သေပြီးနောင်ဘ၀ အတွက် ဘာမှ မပူပါဘူး … (ရှေးဘ၀ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေ ခုဘ၀မှာခံနေရတာ ဆိုတာ တရားမျှတမှုမှမရှိတ ကြီး .. ဘာဖြစ်လို့လည်း လို့ မေးရင် မမှတ်မိလို့ လေ .. မှတ်မိရင်တော့ တရားမှာပေါ့ .. ခုဟာက .. ရှေးဘ၀ ရှိခဲ့တယ်ထား .. မှတ်မှ မမှတ် မိတာ .. ခံရတာ လုံးဝ မတရားပါဘူး ) ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ကိုးကွယ်တာ ဘာလဲလို့ မေးရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ .. လို့ဖြေပါတယ် .. ဒါဆို ယေရှုတို့ မိုဟာမတ်တို့ ကို မယုံဘူးပေါ့လို့ မေးရင် လေးစားပါတယ် .. ယုံလည်း ယုံပါတယ် ..လို့ ဖြေပါတယ် .. ( ဘယ်ဟာ မဆို လိုသလို အသုံးချနိုင်ရင် ကိုယ့်အတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက်တွေပါဘဲ ဟုတ်ဘူးလား .. ) အမှန် ပြောရရင် အကုန် အတုတွေ ပါဘဲ .. အစစ်က သေသွားခဲ့ပြီကိုး .. ! ဟီး .. (တွေးမိတာလေး .. ×××)
အင်း mr အောင်ပု ပြောတာ လက်ခံပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို marketing ဆင်းတယ်ဆိုတတာကို အကို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို တုန့်ပြန်လိုပါသလဲ။
ကျွန်တော့ ဘက်က ပြောဖို့ စည်းရုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဆွေးနွေးစေချင်တာပါ။
ကျုပ်လည်း ဒီနေရာမှာ တစ်ခုလောက် မေးပါရစေဗျာ ..
ကျုပ်တို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာတရားကို ..
ယုံကြည်လို့ ကိုးကွယ်နေတာလား ..
ကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ ယုံကြည်လာတာလား ….
အထက်ပါပို့စ်ပိုင်ရှင်ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာအရ အသင်းအဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ခုရဲ့လုပ်ရပ်ပဲဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ The Catholic Church ဆိုတဲ့အနက်က အရမ်းကိုကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ လူကိုလူချင်းဖြိုမှာကို တော့တွေးမပူပါနဲ့။ ရာခိုင်းနှုန်းချင်းလုံးဝမမျှတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။
ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက် (ဆိုလိုတာက ကိုယ်ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာတရားရဲ့ အနှစ်သာရကို သေသေချာချာ နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်) ပူစရာ မလိုဘူးလို့ လူဟားမြင်တယ်။ ကျွေးတာစား ပေးတာယူ .. ပြီးတော့ ငြင်းပစ်လိုက်ပေါ့။ နောက်ထပ် ဘာမှ မလာတော့ရင်လည်း ဘာဖြစ်သေးလဲ… ကိုယ့်ဘာသာတရားကို လေးနက်တဲ့ယုံကြည်မှုမျိုး ရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ ဘုရားက ကယ်တင်မပေါ့… ဘုရားပါဆိုမှတော့ ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ် ကူနိုင်ကယ်နိုင်တဲ့ တန်ခိုးရှိရမှာပေါ့…။
that’s right .. ! I believe in myself .. ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် ကို ကျွန်တော် ကတော့ ကယ် မှာဘဲ.ဗျ ..
ကျွန်တော်တို့ဘုရားကတော့ ကယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော် .. လူတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးစရာ ရှောင်ကျဉ်စရာတွေကိုပဲ ဟောကြားညွန်ပြထားခဲ့တာပါ ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ် မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ် …ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ရမယ် .. နောင်ဘ၀ဆိုတာကိုယုံကြည်ရမယ် …
Crystalline ပြောသလို ရာခိုင်နှုန်းချင်း မမျှတဲ့အနေအထားဆိုတာ အခုတော့မှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီတစ်မိသားစုထဲမဟုတ်ပါဘူး မိသားစုပေါင်းများစွာ ပါ .. နောင်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ကျန်ပါဦးမလား .. တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာထက် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများနေလို့ပါ ..
“လောကသည် အဆုံးရှိသည် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊ “လောကသည် အဆုံးမရှိ
“ထိုအသက်သည် ထိုကိုယ်ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊ “အသက်သည် တခြား၊ ကိုယ်သည်
တခြားဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊
“သတ္တ၀ါသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊ “သတ္တ္တ၀ါသည် သေပြီးနောက်
မဖြစ် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊
“သတ္တ၀ါသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်လည်းဖြစ်၊ ဖြစ်လည်းမဖြစ် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊
“သတ္တ၀ါသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်
ဟူ၍လည်းကောင်း” ဤသို့ ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်စိတ်ကို မကြံစည်ကုန်ရာ။
ဤသို့ကြံစည်ခြင်းသည် ယုတ်ညံ့သည်၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်မစပ်၊ မဂ်တည်းဟူသော
အကျင့်မြတ်၏ အစမဟုတ်၊ ငြီးငွေ.ရန်၊ တပ်မက်ခြင်းကင်းရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်၊
ထူးသောဥာဏ်ဖြင့်သိရန်၊ ကိုယ်တိုင်သိရန်၊ တဏှာမှ လွတ်မြောက်ရန် မဖြစ်။
ကြံစည်လိုကြလိုကြကုန်သော် “ဤကား ဆင်းရဲတည်း” ဟု ကြံစည်ကုန်ရာ၏။ “ဤကား
ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ရာ အကြောင်းတည်း” ဟုကြံစည်ကုန်ရာ၏။
ထိုကဲ့သို့ကြံစည်ခြင်းသည် အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်၏၊ မဂ်တည်းဟူသော
အကျင့်မြတ်၏အစ၊ ငြီးငွေ.ရန်၊ တပ်မက်ခြင်းကင်းရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်၊
ထူးသောဥာဏ်ဖြင့်သိရန်၊ ကိုယ်တိုင်သိရန်၊ တဏှာမှ လွတ်မြောက်ရန် ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် “ဤကား ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ရာ အကြောင်းတည်း”
ဟုသိရန်အားထုတ်ရမည်။ သို့မှသာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်တည်း။
ငါ့နဲ့ thihayarzar ရဲ့အယူအဆချင်းကတော့ ထပ်တူပါဘဲ။
၀င်ရောက်ကာကွယ်ပေးနေသော thihayarzar ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
ကိုminn zaw ကော်မန့်လဲ အရမ်းကြိုက်တယ်။
တဆက်တည်းပြောပါမယ်။လိုက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ အော်ကကော်မန့်ကို အင်းးးးးးးးး
ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားသမျှ….ဒီပြဿနာမျိုးတွေ ရှိနေဦးမှာပဲ……ဆရာတွေကလဲ ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ပြနေ သမျှ ဘယ်တော့မှ မတည်ငြိမ်ဘူး။ တကယ်လို့သာ..သိမြင်မှုနဲ့တည်ဆောက် ပြမယ်ဆိုရင် ဘာသာပြောင်းတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဥပမာ မြေကြီးကို မြေကြီးလို့သိမြင်ထားသူဟာ.. အဲဒါမြေကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ လက်ခံပေးပါ….ငွေဘယ်လောက်ပေးပါမယ် ဆိုတာမျိုး……ဘယ်လောက်ပေးပေး…ငွေရလို့သာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင် ပြောမယ်…..သူ့သိမြင်မှုမှာတော့ မြေကြီးက မြေကြီးက မြေကြီးပါပဲ
အဟဲ မနေနိုင်လို့ ဝင်ရေးမိတာပါ အခုခရစ်ယာန်တွေဒီလိုစည်းရုံးတော့ ကော်မန့်တွေမှာ ဘယ်သူမှလာမဆဲကြဘူးနော် အေးအေးဆေးဆေးပဲ တကယ်လို့ ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့စာလုံးအစား ကုလားတွေလို့ရေးကြည့် ရွာလူမိုက်လို့ကြွေးကြော်တဲ့လူတွေတန်းစီရောက်လာမှာ လူတွေကလဲထူးဆန်းပ ဟားဟား
ကနေ့ Buddha အင်ပါယာ တဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းမြောင်လာတာ …ဒီလို Buddha တပည့် မဟုတ်တဲ့ လူတွေ
များနေလို့ပါ.. တိုက်စစ်ချည်းချည်း မလုပ်နဲ့ ခံစစ်ဖြစ်တဲ့ သဘောတရားမှန်မှန်သာရှိရင် ဒီလို မဖြစ်ဘူး..
ငြိမ်နေလို့ကတော့ ခေါင်းပေါ်ချီးတက် ယိုတော့မပေါ့ .. ခံစစ်ချည်းပဲ လုပ်နေလို့ ဂိုးတွေသွင်းသွားလိုက်တာ မနည်းပါဘူး .. ကိုက အခုမှ တန်ပြန်တိုက်စစ်လေး ဖွင့်မလိုရှိသေး သူတို့တစ်သင်းလုံး တိုက်စစ် မြင့်နေပြီ ..
တိုက်စစ်ကကွက်ကျားမိုးလေးဖြစ်နေသလားလို့ ပျော့ပျော့လေးနဲ့နံတဲ့ကြောင်ချီးတွေတွေအများကြီး အများကြီးမကြည့်နဲ့ ကရင် ချင်း ကချင်ဒေသ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ Church ကျောင်းဘယ်သင်းပိုများလဲလို့ စဉ်းစားဖို့ပါ
သဂျီး အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့
ဟီး .. မဆိုးပါဘူး … သဂျီး .. ၀င်ပါစရာ မလိုသေးပါဘူး .. comment လေးတွေ ကလှပါတယ် ဗျာ .. ဖတ်ရတာ .. သူများစိတ်ထဲ ရောက်သွားသလိုလိုဘဲ .. ! Psychology သမားတွေ ဒီလိုမျိုးများများ ရေးပြီး .. လူ့ စိတ်ကိုလေ့လာသင့်တယ် .. !
အပိုင်း ၁ နဲ့ ၂ နှစ်ခုလုံးအတွက်ပေါင်းပြီး ကွန်မင့်န်ပေးလိုက်တယ်နော်။ မရေးတော့ဘူးလို့အတန်တန်စဉ်းစားပေမယ့် လည်း အသိစိတ်ကလက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်တခါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ ပို့စ်တွေကိုဘယ်တော့မှ မဖတ်တော့ဘူးလို့လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ချင်လို့ပါ။
ဒီစာကလည်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမရဲ့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးချက်ပါ။ အစ်ကို လုပ်ပေးနိုင်တာရှိပါတယ်။ သူတို့မ်ိသားစုဆီသွားပြီး သူတို့အခုလို ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အနေအထားမှာ နေ့စဉ်စိတ်သောကရောက်၊ စိတ်ဆင်းရဲပြီး နောင်တတွေနဲ့နေ့စဉ်ရှင်သန် နေရတယ်ဆိုရင် နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့အခွင့်အရေးသူတို့မှာအပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။ ပေးထားတဲ့ သူတွေလည်း သူတို့ကိုဘာဆိုဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာပါ။ လုံးဝမလူးသာမလွန့်သာ ချောင်ပိတ်မိနေတဲ့အနေအထားမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလူတွေသည်သူတို့အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ (တခြားနီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ ပတ်ဝန်းကျင်က မတတ်သာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှစ်လျှူရှု့ထားရတဲ့အခြေအနေမှာ)
ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးရှင်လို့တော့သတ်မှတ်ပြီး ဆုတောင်းမေတÅာပို့သပေး ပေါ့။ ကိုယ့်ကို ပြုပေးဖူးတဲ့အမှု့အတွက်အကြွေးရှိနေတယ်လို့ခံစားရရင်လည်း ကိုယ်တတ်နိုင် တဲ့အချိန်မှာ တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးနဲ့ပြန်လှူလိုက်ပေါ့။
အင်းးး….သူတို့မှာတကယ့်ကိုခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက် ခံယူချက်တွေရှိနေရင်. … သားတွေသမီးတွေနိုင်ငံခြားပို့ပေးပြီး ကိုယ်ပိုင်ကားစီးနိုင်လောက်မယ့်အချိန်အထိ ကိုတော့စိတ်ဆင်းရဲခံပြီး မစောင့်နေပါနဲ့တော့လို့……..
ရေးတဲ့သူကတော့ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပဲရေးရေး စာဖတ်သူတွေ့ရဲ့အတွေးအမြင် တွေကို ဖလှယ်ဆွေးနွေးတင်ပြကြတဲ့အခါမှာ အချို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ဟာ အသင်းအဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ခုရဲ့လုပ်ရပ်ကို ဝေဖန်ရာကနေပြီး ခရစ်ယာန်အားလုံး ကိုပါသုံးသပ် စွပ်စွဲနေသလိုခံစားရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိပါသည။် အဲဒီလို ငွေထုတ်ပိုက်ပြီး ဘာသာဝင်စုဆောင်းနေ တဲ့အသင်းအဖွဲ့ရဲ့အင်အားက အလွန်ဆုံးရှိလှ ထောင်ဂဏန်းပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ သန်း ၆၀ကျော်ရှိတယ်။ ကိုယ့်ရှိပြီးသားအဖွဲ့အစည်းတည်တံ့ဖို့၊ ပိုမိုခိုင်မာကျစ်လစ်ဖို့၊ ဘာသာရေးခံယူချက်တွေ ပိုမိုရင့်ကျက်ဖို့၊ ရှိစုမဲ့စုအင်အားလေး မပြိုကွဲဖို့၊ ဖြိုခွဲမခံရဖို့၊ မယိမ်းယိုင်ဖို့၊ ဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်နေထိုင်နိုင်ဖို့ စတာတွေကိုပဲ ဦးတည်ချက်ထား လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့အရေအတွက်က အဆပေါင်းများစွာပိုပါတယ်။ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ တခြားဘာသာတွေအတွက် သာသနာပြုဖို့ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဘောင်လေးကလည်း အရမ်းကျဉ်းမြောင်းလွန်းပါတယ်။ အစ်ကိုပြောတဲ့သူတွေ သူတို့ကိုအခုလိုတစ်အိမ်တက်ဆင်းနဲ့ စည်းရုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ နည်းမျိုးထက် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့နည်းတွေနဲ့…. ဥပမာ.. မီဒီယာ စသည်အားဖြင့် တို့နဲ့လည်း စည်းရုံးဖို့ အခွင့်အရေးမပေးထားပါဘူး။
ကျမရဲ့ဦးလေးနှစ်ယောက်နဲ့အစ်ကိုနှစ်ယောက်ဟာ ဘာသာခြားအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင် ကျတယ်။ သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးများသည်လည်း သူတို့ရဲ့ ဘာသာတရားကို တကယ့်ကို လေးစားလိုက်နာပြီး ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့သူ တွေပါ။ ဒါပေမယ့်ဘာသာမတူတဲ့ သူတို့ကြားမှာ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှု့မျိုး မရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ေ၇းကို တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ကိုယ်လုပ်ပြီး လူသားတိုင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စာနာတတ် လေးစားတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာမှာ သုံးနှုန်းထားတဲ့ဥပမာ ကလည့်း ရင့်သီးလွန်းတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
နောက်ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပို(စ့်)တွေဆိုရင် အကုန်ဖျက်ချဗျာ။
စော်ကားတာခံရရင် မခံနှိုင်တဲ့သူတွေ အကုန်လက်ညောင်းတယ်။
ရွာလဲဆူတယ်၊ ဖတ်ရင်းဒေါသလဲထွက်တော့ အသက်တိုတယ်။
ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ဒါပေမယ့် တစ်ဘာသာနဲ့ တစ်ဘာသာ မစော်ကားမိစေနဲ့၊
အဟီး .. ယုံကြည် မှု ဆိုတဲ့ Power က အရမ်းဘဲ အစွမ်းထက်လှတယ် နော် …
ဒါကြောင့်လည်း ရှေးက လူတော် တွေ သုံးသုံးသွား ကြတာ ..
ကျွန်တော်လည်း အဲ့ Power သုံးတတ်အောင် လေ့ကျင့်အုံးမှ ..
ဗုဒ္ဗဘာသာဆိုတာ ကံ ကံ၏အကျိူးကိုယုံကြည်ရတယ်
သိမ်မွေ့တယ် စာရဏ၊ကျင့်ကြံခြင်းမရှိရင် အနှစ်သာရကို
သိပ္ဗံပညာရှင်တွေ နားမလည်၊ပြန်ရှင်းပြလို့မရတဲ့ ရုပ်တွေ
့သော ရေတွင်းကို ဆယ်တောင်ခန့်မျှရှိသောဝါးဖြင်တိုင်း
မရနိုင်သောကြောင့် ရွာသားအပေါင်းတို့ စိတ်လျော့ကြ
စာကြွင်း–ဗုဒ္ဗဘာသာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ သိရှိခံစားလိုတယ်
ဆိုရင် အမြန်ဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးက အနတ် လက္ဗဏသုတ်ကို စပြိးလေ့လာရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ငွေနဲ့ပေါက်လို့ ဘာသာမပျောက်စေနဲ့ အပိုင်း ( ၂ ) – thihayarzar – Posted by thihayarzar on Jun 1, 2012
ပို့စ်တင်ထားတဲ့အချိန်ကာလလေး.. သတိထားစေလို… :harr: